နိုင္ငံေက်ာ္မင္းသမီးႀကီးေမ၀င္းေမာင္ အေမရိကန္နိုင္ငံမွာ ျပသမဲ့ ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္လမ္းတြဲတြင္ ပါဝင္သ႐ုပ္ေဆာင္မည္……. – Cele Oscar
နိုင္ငံေက်ာ္မင္းသမီးႀကီးေမ၀င္းေမာင္ အေမရိကန္နိုင္ငံမွာ ျပသမဲ့ ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္လမ္းတြဲတြင္ ပါဝင္သ႐ုပ္ေဆာင္မည္…….
September 30, 2021 By L YC Celebrity
မင်းသမီးကြီး သရုပ်ဆောင် မေဝင်းမောင်ဟာနှစ်ပေါင်း (၃၀) အတွင်းသူမရဲ့အနုပညာတွေကို မဖော်ထုတ်ဘဲနေလာခဲ့ ပေမယ့်NBC၊Channelကတင်ဆက်တဲ့New Amsterdam တီဗီဇာတ်လမ်းတွဲမှာ ၊ ဟေမာတံခွန်၊ဆိုတဲ့ မြန်မာအမျိုးသမီးကြီးတစ်ယောက်အနေ နဲ့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်မှာ ဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုသူမရဲ့ဖေ့စ်ဘုတ်စာမျက်နှာမှာ အခုလိုပဲရေးသားထားပါတယ်။အတွေအကြုံ ၊ အသစ်မဟုတ်သောအသစ်၊နှစ်ပေါင်းသုံးဆယ်လောက်အတွင်းမှာလုံးဝနီးပါးခေါက်ထားခဲ့ရတဲ့ကိုယ့်ရဲ့အနုပညာ နဲ့ ပါတ်သက်ပြီး လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုအတွက်ပါဝင် ဖို့ အခွင့်အရေးတစ်ခုပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။တီးခေါက်ကြည့်တယ် ၊ ဖြစ်နိုင်မယ်လို့ထင်တယ်၊ကြိုးစားကြည့်တယ် ၊ လှုပ်ရှားခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။
ဒီလိုနဲ့ပဲ တစ်ယောက်တည်း တစ်စိမ်းစစ်စစ်မဟုတ် တဲ့ တစ်စိမ်းတို့အလည် NewYorkကိုချီတက်လာခဲ့ပါတယ်၊လှုပ်ရှားဖြစ်တော့လည်းအဆင်ပြေပါတယ်၊တစ်စိမ်းတွေရဲ့အလည်မှာလို့ဆိုရင်ရပေမယ့်တစ်ကယ်တော့ကိုယ်တစ်သက်လုံးရင်းနှီးခဲ့တဲ့လုပ်ငန်းခွင်မို့စိမ်းတယ်လို့မခံစားရပဲစိတ်အေးချမ်းစွာသက်တောင့်သက်သာရှိခဲ့ပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်၊ဒီကTelevisionဇာတ်လမ်းတွဲတစ်ခုမှာမြန်မာလူမျိုးသရုပ်ဆောင်အမျိုးသမီးလိုတယ်ဆိုလို့လျှောက်ကြည့်ရာကZoomနဲ့Auditionလုပ် ဖြစ်ခဲ့ပြီးအရွေးခံရပြီးNewYorkကိုသွားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်၊အဲဒီအချိန်မှာLAကမြန်မာပြည်အတွက်ရံပုံငွေပွဲမှာပါဝင်ဖို့ရှိနေတဲ့အတွက်NewYorkကိုနှစ်ခေါက်သွားခဲ့ရပါတယ်။
မြန်မာလူမျိုးနောက်ထပ်နှစ်ယောက်နဲ့လည်းတွေ့ဆုံဖြစ်ပြီးအတူတွဲပြီးသရုပ်ဆောင်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်၊ဟေမာတံခွန်၊ဆိုတဲ့မြန်မာအမျိုးသမီးကြီးအဖြစ်NBC၊ChannelကNew Amsterdamဆိုတဲ့TV၊Series မှာဧည့်သည်သရုပ်ဆောင်၊GuestStar၊အနေနဲ့ပါဝင်ခွင့်ရခဲ့တာပါ။NewAmsterdamကဆေးရုံတစ်ရုံကအဖြစ်အပျက်တွေကိုတင်ပြတဲ့Seriesဖြစ်ပါတယ်၊ဟေမာခေါ် Miss Takhonကလူနာတစ်ဦးပေါ့၊တစ်ခြားမြန်မာသရုပ်ဆောင်တစ်ဦးကဟေမာရဲ့မြေးမလေးအဖြစ်
တွဲပြီးသရုပ်ဆောင်ရ တဲ့အဓိကသရုပ်ဆောင် ဆရာဝန်Maxအဖြစ်သရုပ်ဆောင်သူကRyan Eggoldဖြစ်ပါတယ်၊Black listကိုကြည့်ဖူးရင်သူ့ကိုသိပါလိမ့်မယ်၊တိုတိုပြောရရင်တော့အစစ အဆင်ပြေပါတယ်၊နောက်မှ ရိုက်ကွင်းအတွေ့အကြုံလေးတွေကို စိတ်ဝင်စားကြတယ်ဆိုရင်ရေးပါဦးမယ်။Season4ရဲ့Episode5၊This Be The Verse ၊ မှာပါဝင်ရတာပါ၊Season4ကအခုစနေပါပြီ၊Episode5က Octoberလထဲမှာလွှင့်မှာဖြစ်ပါတယ်၊Tuesday တွေမှာလွှင့်ပါတယ်၊ကြားထဲမှာဘာအကြောင်းကြောင့်မှအပြောင်းအလဲမရှိပဲအစီအစဉ်အတိုင်းပြရင် October19thမှာဖြစ်ပါမယ်။မြင်နေကျမေဝင်းမောင်နဲ့တော့တူမှာမဟုတ်ပါ၊နှစ်သက်နိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပါတယ်ဆိုပြီးရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်၊စာဖတ်ပရိတ်သတ်ကြီးများအတွက်ပြန်လည်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
လက္ရွိမွာ ေဆး႐ုံတင္လိုက္ရၿပီးေနာက္ ခြဲစိတ္ခန္းဝင္ ေနရတဲ့ ဇနီးျဖစ္သူ နႏၵာလွိုင္ ရဲ့ အေျခအေနကို ေျပာျပလာတဲ့ ဦးေဇသီဟ….